पूर्वराजा वीरेन्द्रको भेटियो ८७ अर्ब सम्पत्ति ! - Everest Dainik - News from Nepal
पूर्वराजा वीरेन्द्रको भेटियो ८७ अर्ब सम्पत्ति !
काठमाडौं, असोज १९ । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारको नाममा खहिलेसम्म करिब ८७ अर्बको चल अचल सम्पत्ति भेटिएको छ ।
पुर्वराजा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गठिन नेपाल ट्रस्टको कार्यालय हालसम्म पुर्व राजा जाजपरिवाको सम्पत्ति ८७ अर्ब भएको अनुमान गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको विहीबारको बैठकमा नेपाल ट्रस्टका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अहिलेसम्म ८७ अर्बको रकम प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
सो सम्पत्तिलाई अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकाली व्यावसायिक योजना बनाएर परिचालन गरी आएको रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने उदेश्य रहेको उनले बताए । सो उदेश्य हासिल गर्न निर्देशिका तयार गरिएको पनि उनले बताए ।
नेपाल ट्रस्टमा स्वर्गीय वीरेन्द्र र उनको परिवारको अचल सम्पत्तिअन्र्तगत १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको सचिव सिंहले जानकारी दिए । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: Former king birendra shah